Banyere Anyị, Embroidery Thread, Polyester Sewing Thread Factory
Ningbo MH string Co., Ltd. bụ otu ụlọ ọrụ nke Ningbo MH Industry Co., Ltd. O lekwasịrị anya na ịkwa akwa na eriri akpa arụ na-arụ ọrụ kemgbe afọ 12. Ugbu a MH nwere mpaghara ụlọ ọrụ atọ nwere mpaghara ihe ọkụkụ 120,000m2, ndị ọrụ 1900, ma nwee igwe dị elu na sistemụ nrụpụta siri ike, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa ezigbo mma na ntụkwasị obi.
MH Sewing string Industry Production gụnyere: yarn spins, nhicha, ikuku ikuku, mbukota na ule. Kwa afọ na-amịpụta ikike bụ 30000+ ton. Ngwaahịa anyị gụnyere spun na corespun polyesters ka naịlị naịlọn na braed polyester braids, dị n'ọtụtụ na nkọwapụta iji gboo mkpa ndị ahịa niile nwere ike. MH ịkwa akwa Mint na-enye ndị na-emepụta ụwa nke uwe, akwa akwa, kapeeti, ejiji ụlọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nkwakọ ngwaahịa na ngwaahịa ndị ọzọ sewn gburugburu ụwa, ndị ahịa zuru ụwa niile na-anabata nke ọma na ọnụahịa asọmpi.
Embroidery Ọkpụkpụ Aka:
MH Embroidery Thread Industry nwere usoro zuru ezu nke mmepụta nke ntụgharị, ịcha akwa, ịkpụzi na ịkpụzi, nke na-eme ka imepụta oge na-ewepụta ezigbo ngwaahịa maka rayon embroidery thread na polyester embroidery thread, ikike anyị na-arụ kwa afọ bụ 10000 + ton. Nnukwu ike, nkwonkwo ole na ole, agba dị mma, njikwa dị nro na ịdị ngwa agba bụ ihe anyị na-enye ndị ahịa.
Mmekọrịta MH Mw na MH Embroidery Thread Industry wee nweta akwụkwọ nke ISO9001 na OEKO-TEX, anyị na-ele nchedo gburugburu ebe obibi, kwa afọ na-ebelata ike ike na nkà na ụzụ na-emepe emepe, iji mee ihe n'ụzọ dị irè nke ngwa, ike na mmiri.